संक्रमितलाई ‘विभेद’ को डर- समाचार - कान्तिपुर समाचार
परिवारका सदस्यमा संक्रमण पुष्टि हुँदा छरछिमेक टाढिनु र बोल्नै छाड्ने व्यवहार गर्नुले विभेदले सामाजिक जटिलता ल्याएको छ । संक्रमित आइसोलेसनमा छन्, परिवारलाई उनीभन्दा बढी चिन्ता छिमेकीले कस्तो व्यवहार गर्लान् भन्ने परेको छ ।
जेष्ठ २३, २०७७ प्रदेश ब्युरो
बुटवल — कपिलवस्तु नगरपालिका कार्यालयबाट गत जेठ ९ मा आफूलाई कोभिड–१९ संक्रमणको खबर आउँदा तौलिहवाका एक सञ्चारकर्मी आफ्नो कार्यालयमै थिए । ‘खबर परिवारलाई बताउन चाहन्थें,’ उनले भने, ‘अरूलाई पनि सर्‍यो कि भन्ने मनमा चिन्ता थियो ।’
परिवारलाई सम्झाएर घरमै ‘सेल्फ आइसोलेसन’मा बस्न चाहन्थे । परिवारको चाहना पनि त्यही थियो । ‘तर, रिपोर्टिङमा हिँडेदेखि छिमेकीले कुरा काट्न थालेका थिए,’ उनले भने, ‘त्यो सम्झेर घर जाने आँट आएन ।’
परिवारसित देखभेट टुटेको १३ दिन भइसक्यो । पीसीआर रिपोर्टमा कोरोना पुष्टि भएपछि घर नआउने र कार्यालयमै बस्ने सुनाए । परिवारले सहमति जनाए । उनी संक्रमित भएको थाहा पाएपछि श्रीमती र चार वर्षीय छोरालाई अन्यत्र गएर बस्न भनियो । तीन दिनसम्म दबाब दिइरहे । उनले श्रीमती र छोरालाई घरभित्रै बस्न भने । उनीहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । ‘श्रीमतीले पनि लक्षणबिनाको कोरोना सामान्य हो भनेर सम्झाइन्,’ उनले भने, ‘त्यसपछि घर वरिपरिका मानिस उदार बनेका छन् ।’ तर, उनले भेदभाव महसुस गरिरहेका छन् । उनी आइसोलेसनमा रहेको कार्यालय वरपरका बासिन्दा टाढैबाट बोल्नसमेत हिचकिचाउँछन् । ‘मेरो कार्यालयको बाटो हुँदै हिँडडुल कम गर्छन्,’ उनले भने ।
परीक्षणको पहिलो रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि ढुक्कसाथ घरमै बसेर काम गरिरहेका कपिलवस्तुकै अर्का युवाले पनि सामाजिक विभेद सहनु पर्‍यो । बुद्धभूमि–२ का उनी बुटवलस्थित आइसोलेसन सेन्टरमा आउँदा एम्बुलेन्स चढेनन् । ‘एम्बुलेन्समा आउँदा समाजमा त्रास फैलिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘परिवारलाई गाह्रो हुने भए पनि मोटरसाइकलमै आएँ ।’ उनका अनुसार उनी बस्ने क्षेत्र बजार हो । सधैं भीडभाड हुन्थ्यो । ‘म संक्रमित भएको खबरपछि सुनसान बनेको छ,’ उनले भने, ‘घरमा दूध ल्याइदिन छाडेका छन् रे ।’ कोरोनाबारे अफवाह बढी भएकाले समाजमा त्रास रहेको उनले बताए । ‘आइसोलेसन सेन्टर खोज्दै हिँड्नुभन्दा लक्षण नदेखिए घरमै सेल्फ आइसोलेसनमै बस्नु उपयुक्त उपाय हो,’ उनले भने, ‘तर, समाजलाई बुझाउन सकिएन ।’
कपिलवस्तुको वाणगंगाकी संक्रमित युवती अहिले बुटवलको एन्फा एकेडेमी आइसोलेसनमा छिन् । जेठ १० मा संक्रमित भएको खबर आएपछि कार्यक्षेत्रबाटै आइसोलेसन सेन्टरमा आएकी हुन् । परिवारले घरमै बस भन्न सकेनन् । उनले जाने आँट गरिनन् । अहिले उनको माइतीघरको गेटमा ‘हामीसँग सम्पर्कमा नआउनुहोला, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोला’ भनेर सूचना टाँसिएको छ । घरतिर छिमेकीलाई जानकारी भएको छ । माइती र घरतर्फका परिवार सेल्फ क्वारेन्टाइनमा छन् । ‘घरमा अलग्गै बस्न सकिन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर, समाजले कुरा गर्ने, त्यसैले पनि दूरी राख्नुपर्ने भयो ।’ कोरोनाले भावनात्मक दूरी बढाएको महसुस गरेको उनले बताइन् ।
प्रदेशमा दैनिक संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । यहाँका चार कोरोना अस्पताल भरिभराउ छन् । सबै संक्रमितलाई अस्पताल पुर्‍याउने वातावरण नभएपछि स्थानीय तहमा आइसोलेसन सेन्टर निर्माणका लागि दबाब छ । अधिकांश स्थानीय तहले यसअघि रहेका क्वारेन्टाइनकै खाली कोठामा ओइसोलेसन वार्ड बनाएका छन् । केहीले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका खाली भवन खोजेर हतारमा बनाइरहेका छन् । यस्ता सेन्टरमा उपचारभन्दा संक्रमित राखेर रेखदेख गर्ने मात्र उद्देश्य छ । चिकित्सकले असुविधा भएका यस्ता आइसोलेसनमा भीड बढाउनुभन्दा सर्वसाधारणलाई कोरोनाबारे चेतना जगाएर घरमै संक्रमितलाई सेल्फ आइसोलेसनमा राख्ने वातावरण तयार गर्न जोड दिइरहेका छन् । त्यसका लागि परिवार तयार भए पनि संक्रमण फैलिने भन्दै समाजले नै विरोध गर्न थालेका छन् । संक्रमित आफ्नै गाउँ, टोलमा परिचित हुने वातावरण छैन । जसले गर्दा सबै संक्रमितको व्यवस्थापन नहुँदा उनीहरूमा मानसिक तनाव बढेको पाइएका छन् ।
प्रदेश सरकारले दाङको तुलसीपुरस्थित बेलझुन्डीमा कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन गरिए पनि तीन साताअघि जिल्लामा संक्रमित थिएनन् । गत वैशाख ३० गते बर्दियाकी ११ वर्षीया संक्रमित बालिकालाई उक्त अस्पतालमा ल्याउने तयारी भयो । बर्दियामा कोरोना विशेष अस्पताल नभएको र बाँकेको पनि भरिभराउ भएकाले विकल्पमा दाङ ल्याउन थालिएको थियो । तर जिल्लामा संक्रमित नभएकाले बाहिरबाट ल्याउनु जोखिमपूर्ण हुने भन्दै सार्वजनिक रूपमा विरोध भयो । अन्त्यमा बालिकालाई नेपालगन्जमै व्यवस्थापन गरेर उपचार थालियो । दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी बाहिरबाट संक्रमितलाई ल्याउनु दाङ जिल्लावासीको अपहेलना हो भने । उक्त विज्ञप्ति र सामाजिक सञ्जालमा आएका विरोधको जवाफमा बेलझुन्डीस्थित कोरोना विशेष अस्पताल व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रदेशभरका बिरामीको उपचार गर्न सकिने निर्णय गर्‍यो ।
उक्त अस्पतालमा अहिले प्रदेशका ६ जिल्लाका ५० संक्रमित छन् । ‘अन्त चाप बढेपछि बिरामी ल्याउनु स्वाभाविक हो,’ अस्पताल प्रमुख डा. सर्वेश शर्माले भने । अस्पतालमा बिरामी राख्न थालेदेखि स्थानीय रुष्ट छन् । ‘कोरोनाबारे सबैमा सही जानकारी हुन आवश्यक छ,’ डा. शर्माले भने, ‘उपचार गर्दैमा अरूलाई सर्दैन । यो संकटका बेला सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।’ घोराही–१४ मा स्थानीयको विरोधले लामो समय क्वारेन्टाइन बन्न सकेन । कल्पु धर्मशाला, बालमन्दिर, शुभप्रभात माविलगायत ठाउँमा क्वारेन्टाइन बनाउन खोज्दा विरोध भयो । बस्ती बीचमा क्वारेन्टाइन राख्न खोजेको भन्दै स्थानीय लाठी बोकेर सडकमा निस्केका थिए । कोरोनाबारेमा गलत बुझाइ हुँदा सामाजिक विभेद बढिरहेको घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरी बताउँछन् । ‘क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउन नदिनु कोरोना घरमा भित्र्याउनु हो,’ उनले भने, ‘बाहिरबाट आएकालाई राख्ने ठाउँ नभए सीधै घरमा जान्छन्, त्यसले बस्ती नै जोखिम हुन्छ ।’
गत जेठ १० गते बस्तीबीचमा क्वारेन्टाइन बनाइएको भन्दै रूपन्देहीको कोटहीमाई–६ का चार सय स्थानीयले प्रदर्शन गरेका थिए । क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन फितलो भएको र त्यहाँ बसेकाहरू गाउँ डुलेको भन्दै उनीहरूले विरोधमा उत्रिएको जनाएका थिए । डेढ साताअघि बाँकेको नरैनापुरबाट संक्रमितलाई नेपालगन्जस्थित आइसोलेसन सेन्टरमा ल्याउने क्रममा स्थानीयले एम्बुलेन्स घेराउ गरे । गाउँमा आइसोलेसन सेन्टरमा सुरक्षित नहुने ‘भ्रम’ फैलाइएपछि संक्रमितका आफन्त विरोधमा उत्रिए । गत जेठ ९ गते राति स्थानीयले १३ जना संक्रमितलाई क्वारेन्टाइनबाट भगाएपछि त्रासको वातावरण बन्यो । संक्रमित रातभरि रूखमा, नालीमा लुके । अर्को दिन सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर उनीहरूलाई नेपालगन्जस्थित लायन्स डेन्टल अस्पतालमा राखियो । त्यहाँ कोचाकोच गरेर बस्न बाध्य भए । संख्या बढेपछि नयाँ आइसोलेसन सेन्टरका लागि खाली सरकारी भवनको खोजी गरियो । कोहलपुरको पिपरीस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रलाई आइसोलेसन सेन्टर बनाउने प्रयास गरियो । स्थानीयले विरोध गरेपछि प्रहरीलाई समस्या भयो । त्यसअघि भारतबाट आएकाहरूलाई त्यहीं क्वारेन्टाइन बनाएर राखिएको थियो । तीन दिनपछि मात्रै बैंकको तालिम केन्द्रमा संक्रमित राख्ने प्रयास सफल भयो ।
कोहलपुर नगरपालिकाले बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा क्वारेन्टाइन बनाउन खोज्दा आसपासका स्थानीय विरोधमा उत्रिए । कोहलपुरका नगर प्रमुख लुटबहादुर रावतलाई सडकमै घेरे । प्रहरीले मुस्किलले रावतलाई मुक्त गराएको थियो । कोरोनाबारे सर्वसाधारणमा भ्रम फैलिएका कारण विरोध र विभेद भइरहेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापामगरले बताइन् । ‘आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन बनाए संक्रमण फैलिने भ्रम छ,’ उनले भनिन्, ‘क्वारेन्टाइन व्यवस्थित हुने र बस्नेहरू अनुशासनमा रहेमा डर मान्नु पर्दैन ।’
कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका–८, बाँसखोरका गंगाराम यादवलाई छरछिमेकले हेयको दृष्टिले हेर्छन् । छोरा संक्रमित भएकाले हेलाँ गरिएको उनको गुनासो छ । भारतबाट फर्किएका उनका छोरा सीधै घर गएनन् । वारि आउनासाथ गाउँको क्वारेन्टाइनमा गएर बसेका थिए । १० दिनपछि भएको परीक्षणबाट उनमा संक्रमण पुष्टि भयो । छोरालाई संक्रमण देखिएदेखि गाउँले परपर भाग्न थालेको उनले बताए । ‘अहिले देखे पनि नदेखेजस्तै गर्छन्,’ उनले भने, ‘कोही बोल्दैनन् ।’ छोरा बिरामी भएको छ । त्यो तनाव त छँदै छ । छरछिमेकको व्यवहारले अपहेलित भएको महसुस भइरहेको उनले बताए । ‘आत्मबल बढाउन हौसला दिनुपर्ने बेला यातना दिएजस्तो भएको छ,’ उनले भने ।
महाराजगन्ज नगरपालिका–८, कजरहवाका श्यामानन्दलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ । उनका छोरा संक्रमित छन् । मुम्बईबाट आएर घरै नपसी क्वारेन्टाइनमा गएका थिए । त्यहाँ पोजिटिभ देखिए । ‘अहिले छोरा जानकी माविको आइसोलेसनमा छ,’ उनले भने, ‘छिमेकीहरू हेयभावले व्यवहार गर्छन् ।’ गाउँलेले फरक व्यवहार गरिरहेको उनले सुनाए । ‘समस्याका बेला सहयोग र सद्भाव देखाउनुपर्नेमा टाढिँदै गएका छन्,’ उनले भने । अहिले संक्रमितका परिवार एकलकाँटे बनेका छन् । परबाट तर्केर भाग्छन् । अछूत जस्तो व्यवहार गरिएको पीडितको दुखेसो छ । ‘संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्ने चिन्ता उस्तै छ,’ यशोधरा गाउँपालिका अध्यक्ष गिरजेश पाण्डेले भने, ‘समाजमा संक्रमितका परिवारप्रति विभेदले झन् समस्या भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार गाउँमा संक्रमण भएका परिवारसँगै बोलचाल बन्द गरिएको छ । ‘विभेद देखिएको छ,’ उनले भने, ‘संक्रमण भएका व्यक्ति आइसोलेसनमा छन् । परिवारलाई तनाव छ ।’
संक्रमित भएपछि बिरामी मानसिक रूपमा त्रासमा छन् । त्यसमाथि परिवार र समाजबाट गरिने विभेदले डिप्रेसनमा जाने खतरा बढेको बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालका डा. सुदर्शन थापाले बताए । ‘सामाजिक विभेदको असर दीर्घकालीन हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘संक्रमण पुष्टि भएकालाई स्थानीय तहले आइसोलेसन सेन्टरमा राखेर रेखदेख गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ कोरोनाबारे समाजमा रहेका भ्रमबारे चेतना फैलाएर घरमा सुरक्षित तरिकाले सेल्फ आइसोलेसनमा बस्ने वातावरण तयार गरिनुपर्ने उनले बताए । लक्षण देखिएका र अन्य दीर्घ रोगीलाई मात्र अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने उनले बताए ।
-सन्जु पौडेल (तिलोत्तमा), मनोज पौडेल (कपिलवस्तु), दुर्गालाल केसी (दाङ) र ठाकुरसिंह थारू (बर्दिया)
प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७७ ०८:३९
निर्माण सामग्री नपाएर रोकिएका कामले पुन: गति लिँदै छन्
जेष्ठ २३, २०७७ विमल खतिवडा
काठमाडौँ — लकडाउनका बेला निर्माण सामग्री अभावमा रोकिएका र सुरु हुन नसकेका आयोजनामा अहिले विस्तारै काम थालिएको छ । निर्माण सामग्री र कामदार जम्मा गरेर कामलाई गति दिइँदै छ । सुरु भएका आयोजनामा १० देखि ६० प्रतिशतसम्म काम भएको सडक विभागले जनाएको छ ।
सबैभन्दा बढी सवारी चाप हुने नागढुंगा–नौबीसे सडकखण्डमा अहिले ओभर–ले (पिचमाथि पिच) गर्ने कामलाई तीव्रता दिइएको छ । एक सातायता डेढ किमि ओभर–लेको काम सकिएको विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताए । ‘चितवनबाट निर्माण सामग्री ल्याएर काम थालिएको हो,’ उनले भने, ‘पानी पर्दा मात्र काम प्रभावित बन्ने गरेको छ, अरू समयमा निरन्तर छ ।’ उक्त खण्डमा ६ किमि ओभर–ले गरिनेछ ।
ठाउँठाउँमा अहिले आवधिक सडक मर्मतको काम पनि जारी राखिएको महानिर्देशक शर्माले बताए । निर्माण सामग्री अभावले बेलाबेला समस्या हुने गरे पनि सबै ठाउँमा केही न केही काम भएकै छ । पहिलाभन्दा अहिले कामको गति बढेको छ । संखुवासभा, हेटौंडा सडक डिभिजनअन्तर्गतका सडक र पुलमा राम्रो प्रगति भइरहेको उनले जानकारी दिए । गल्छी–त्रिशूली सडकमा पनि धमाधम काम भइरहेको छ ।
‘५० वटा ठेक्का भएकामध्ये १०/११ वटाको काम प्राय: सबै डिभिजनमा भएकै छ,’ उनले भने, ‘आयोजनामा प्रगति पनि देखिन थालेको छ । देशभर ३३ डिभिजन सडक, पुललगायत अन्य आयोजनासहित करिब ८० वटा कार्यालय छन् ।’ ती कार्यालयमार्फत सञ्चालित आयोजना सबैमा काम भएको महानिर्देशक शर्माको दाबी छ । निर्माण सामग्री अभावले कतैकतै समग्र आयोजनामा १० प्रतिशत मात्र काम पनि भएको उनले बताए ।
‘पुल निर्माणमा पहिल्यै सामग्री मौज्दात राखिएकाले त्यति समस्या देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले कतै पनि काम रोकिएको छैन ।’ हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कपिलवस्तु, जनकपुर र वीरगन्जमा काम भइरहेको छ । व्यापारिक मार्गमा पनि धमाधम काम भइरहेको छ । लुभु–इमाडोल, चापागाउँ–लेले सडक खण्डमा पनि काम अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ । चाबहिल–जोरपाटी खण्डका केही भागमा कालोपत्रको काम भएको छ । जोरपाटी–सुन्दरीजल खण्डमा वाल लगाउने र सडक चौडा गर्ने काम जारी छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङ, दैलेख र काभ्रेमा काम भएको छ । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा पनि कामदार ल्याएर काम सुरु गरिएको शर्माले बताए । ‘भनेजति कामदार ल्याउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘कुल कामदारमध्ये एकतिहाइ ल्याइएको छ । सुरुङकै काम भने सुरु भएको छैन, त्यसलाई चाहिने सडक निर्माणको काम मात्र थालिएको छ ।’
निर्माण सामग्री अभावले रोकिएको गौशला–चाबहिल खण्डको काम सुरु गरिएको छ । अहिले सडक भत्काउने काम सुरु भएको छ । कालोपत्रको काम केही दिनभित्र सुरु गरिने डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख कुवेर नेपालीले जानकारी दिए । ‘मौसमले साथ दिइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘सडक खाली भएका बेला काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो भनेर थालेका हौं ।’ भनेकै समयमा निर्माण सामग्री ल्याउन सकिएको भए अहिलेसम्म कालोपत्रको काम सकिने उनको भनाइ छ । ‘निर्माण सामग्री जहाँ भेटिन्छ, त्यहींबाट ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले काभ्रेको रोशी र ललितपुरको टीकाभैरवबाट लुकाइलुकाई ल्याएर काम थालेका छौं ।’
प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७७ ०८:३५